UwuBala njani uMmandla weParallelogram, iKite, okanye iTrapezoid
Iifomula zommandla weparallelogram, ikayiti, kunye netrapezoid zisekwe kwindawo yoxande. La manani alandelayo akubonisa ukuba nganye kwezi zintathu zinxibelelene njani noxande, kwaye olu luhlu lulandelayo lukunika iinkcukacha:
Parallelogram: Kulo mzobo ungasentla, ukuba unqumle unxantathu omncinci ngasekhohlo uze uwuzalise ngasekunene, iparallelogram iba luxande (kwaye indawo ngokucacileyo ayitshintshanga). Olu xande lunesiseko kunye nokuphakama okufanayo neparallelogram yoqobo. Indawo yoxande yile isiseko amaxesha ukuphakama , ke loo fomyula ikunika indawo yeparallelogram nayo. Ungayizama ngokwakho ngokusika iphepha leparallelogram kwaye ususe unxantathu njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongentla.
Kutheni kuthintelwe i-sumatriptan
Ikhayithi: Lo mzobo ungasentla ubonakalisa ukuba ikayiti inesiqingatha sendawo yoxande ezotywe ngeenxa zonke
Uyabona ukuba ubude nobubanzi bexande elikhulu bayafana nobude be-diagonals yekayiti.
Itrapezoid: Ukuba unqumle oonxantathu ababini kwaye ubahambise njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo, i-trapezoid iba luxande. Olu xande lunokuphakama okufanayo ne trapezoid, kwaye isiseko salo silingana nomphakathi ( m I-trapezoid. Ke, indawo yoxande (kwaye ke yile trapezoid nayo) yiyo ophakathi amaxesha ukuphakama .
Isitshixo seengxaki ezininzi zommandla wesikwere kukuzoba ukuphakama kunye namanye amacandelo ahambelana nomzobo. Ukwenza njalo kudala oonxantathu omnye okanye nangaphezulu, ekuvumela ukuba usebenzise iPythagorean Theorem okanye ulwazi lwakho loonxantathu abakhethekileyo, njenge-45 ° - 45 ° - 90 ° kunye ne-30 ° - 60 ° - 90 ° oonxantathu.
Nanku umzekelo: Fumana indawo yeparallelogram A B C D kulo mzobo ulandelayo.
Xa ubona i-engile ye-120 ° kwingxaki, unxantathu ongu-30 ° - 60 ° - 90 ° kungenzeka ukuba ulele kwenye indawo kule ngxaki. (Ewe kunjalo, i-30 ° okanye i-60 ° i-engile kukufa okungasekhoyo nge-30 ° - 60 ° - 90 ° unxantathu.) Kwaye ukuba ubona i-angle ye-135 °, unxantathu we-45 ° - 45 ° - 90 ° kungenzeka ulele .
Ukuze uqalise, zoba ubude beparallelogram ngqo ezantsi ukusuka B ukuya kwicandelo lesiseko UKUYA ukwenza unxantathu ofanelekileyo njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo.
Ii-angles ezilandelelanayo kwiparallelogram ziyongezwa. Angle IABC ngu-120 °, nge-engile UKUYA ngu-60 ° nonxantathu ABE ngu 30 ° - 60 ° - 90 ° unxantathu.
ingakanani iasprini yokunika inja yam
desoximetasone cream usp 0.25 amaxabiso
Iziphumo zovavanyo lwe-tb
ingakanani i-claritin endinokuyithatha
i vardenafil ithatha ixesha elingakanani